Doorashada Guddoonka Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo Maanta dhac - Awdinle Online
Doorashada Guddoonka Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo Maanta dhac
Magaalada jowhar ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle ayaa waxaa lagu wadaa in Maanta lagu qabto doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaas iyo labadiisa kuxigeen.
Shalay ayaa waxaa khudbadahooda musharaxnimo laga dhageystay ilaa lix musharax oo u taagan qabashada xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka Hir-Shabeelle & labadiisa kuxigeen.
Amniga Magaalada Jowhar ayaa Maanta aad loo adkeeyay, waxaana siweyn looga dareemayaa doorashada oo qorshuhu ahaa inay dhacdo Gelinka dambe ee Maanta balse Xildhibaannada lagu wargeliyay inay dhaceyso Gelinka hore, kaddib markii ay soo baxday in Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed in uu ku wajahan yahay Magaalada Jowhar si uu saameyn ugu yeesho doorashada.
Musharixiinta xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hir-Shabeelle iyo labadiisa kuxigeen oo lix gaaraya ayaa waxaa Magacyadoooda ay kala yihiin.
Magaalada Jowhar ayaa siweyn looga dareemayaa doorashada Guddoonka Baarlamaanka Hir-Shabeelle, waxaana doorashadaan ay kusoo aadeysaa xilli weli aan heshiis laga gaarin doorashada Madaxweynaha Hir-Shabeelle.
Previous articleDhageyso:- Waare oo sheegay in Dowladda afduubatay doorashada Hir-Shabeelle